‘प्रेम गीत २’ र ‘म यस्तो गीत गाउछु’ मध्ये दर्शकहरु कुन चलचित्रलाई रोज्छन त ? [ हेर्नुहोस भिडियो ] - Enepalese.com
‘प्रेम गीत २’ र ‘म यस्तो गीत गाउछु’ मध्ये दर्शकहरु कुन चलचित्रलाई रोज्छन त ? [ हेर्नुहोस भिडियो ]
इनेप्लिज २०७४ असार २८ गते २:२३ मा प्रकाशित
यतिबेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘प्रेम गीत २’ र ‘म यस्तो गीत गाउछु’ को चर्चा चुलिएको छ । ट्रेलर सार्बजनिक भएपछि यी दुइ चलचित्रलाई बिभिन्न तवरले तुलना समेत गर्ने गरिएको छ । यसै बिषयमा आधारित रहेर पिएनपि रोड शो अन्तर्गत आजको एपिसोडमा चर्चामा रहेका यी दुई नेपाली चलचित्र मध्ये कुन चलचित्र हेर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भन्ने बिषय लिएर आएका छौ । दर्शकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आयो त ?